Nin u dhashay Faransiiska oo ku eedeysnaa dilal ka dhacay Somalia oo Dacwadii loo haystay la joojiyey – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Nin u dhashay Faransiiska oo ku eedeysnaa dilal ka dhacay Somalia oo Dacwadii loo haystay la joojiyey
Cadadkii shalay ee Wargeyska Asharqal Awsad ee ka soo baxa magaalladda London ayaa qoray in Garsoore u dhashay dalka Belgium uu joojiyey in Muwaadin u dhashay dalka Faransiiska lagu soo oogo inuu qorsheeyey dilka 30 qof oo lagu dilay gudaha Somalia.
Eedeysanahaasi oo lagu magacaabo Rashiid Bin Nacmari oo 46-jir ah waxa la sheegay inuu horey u qirtay inuu qorsheeyey dilal ka dhacay Somalia, sida laga soo xigtay qaar ka mid ah Warbaahinta magaalladda Brusseles.
Qareenadda u doodaysa Eedeysanaha ayaa sheegay in go’aanka uu Garsooraha dalka Belgium ku joojiyey dacwadaasi la qaatay dabayaaqadii bishii April ee la soo dhaafay.
Garyaqaanadiisa oo lagu kala magacaabo Xamiid Abuti iyo Ciise Goltslar waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan waxa sababay in laga noqdo dacwada loo haystay Eedeysane Rashiid Bin Nacmari.
Maxkamadda Dembiyadda ee magaalladda Brussels waxay Eedeysanahaasi xabsi 18-sanno ah ku riday bishii March ee sannadkii 2015-kii, isagoo lagu soo eedeeyey inuu xubin ka ahaa Dgaaalamayaasha Alshabaab tan iyo sannadkii 2011-kii.
Wargeyska Asharqal Awsad waxa uu qoray in Rashiid Bin Nacmari uu haatan xabsigiisa ku qaadanayo Xabsiga Etter oo ku yaalla dalka Belgium.
Eedeysanaha iyo labo kale oo lagu kala magacaabo Mustafa Buu Xabarn, Maxamed Al-saciid waxaa kla sheegay in lagu qabtay dalka Kenya bishii July ee sannadkii 2013-kii, xilli ay ka soo gudbeen xuduudka dhinaca Somalia, waa sida uu Wargeysku qoray.
Dowladda Belgium waxay xilligaasi ka codsatay Dowladda Kenya in loo soo gdubiyo saddexda Eedeysane, iyadoo Rashiid Bin Nacmari lagu xukumay 20-sanno, halka labada Eedeysane ee la socotay lagu xukumay min shan sano oo xabsi ah.
Dhinaca kale, Xafiiska Dacwad-oogaha dalka Belgium waxa uu helay codsiyo ku aadan Kiiss la sheegay inuu Rashiid Bin Nacmari ku lug lahaa 30-qof oo lagu dilay gudaha
Dhageyso;- Warka Duhurnimo Ee Radio Dalsan: